Style – phyodaybyday
Like	10,427 Comments all, Style
April 3, 2017 December 4, 2018
Like	13,559 Comments all, beauty, Style
Hello ! အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ဒီနေ့ အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ သတင်းလေးတစ်ခု ကြေငြာချင်ပါတယ် ။ အဲ့ဒါလေးကတော့ ကျွန်မရဲ့ကိုယ်ပိုင် website လေးလွှင့်တင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ သတင်းလေးပါ ။ Website လေးရဲ့ လိပ်စာကတော့ phyodaybyday.com ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီထဲမှာ ထူးခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ၊…
December 19, 2016 December 4, 2018
Like	4,862 Comments all, Review, Style
Shunji Matsuo Myanmar ရဲ့ Special Scalp Treatment , Mukota Hair Treatment တွေအကြောင်းနဲ့ ကျွန်မရဲ့ဆံပင်စတိုင်အသစ် ။ မင်္ဂလာပါကျွန်မချစ်ရတဲ့ follower အပေါင်းရှင့် ။ မျက်နှာအကြောင်းပြီးသွားတော့ ကတိပေးထားတဲ့အတိုင်း ဆံပင်ဆီသွားလိုက်ကြမယ်နော် ။ ကျွန်မနောက်ဆုံးဆံပင်ညှပ်ဖြစ်ခဲ့တာအခုဆို နှစ်လလောက်ရှိသွားပြီး ဆံပင်တွေရှည်လာတယ်…
December 19, 2016 April 30, 2017
Like	13,304 Comments all, Style
Social Influencer ” Selfie Tips “ ချစ်တို့ရေ ကျွန်မဒီလထဲမှာ OPPO နဲ့ပက်သက်တဲ့ပွဲလေးတစ်ခုတက်ရောက်စရာရှိလို့ သူတို့ရဲ့ပွဲလေးနဲ့ပက်သက်တဲ့ selfie tip article လေးတစ်ခု အရင်ဆုံးရေးပြချင်ပါတယ် ။ ကျန်တာတွေကနောက်မှ ဘာဆက်လုပ်မလည်းဆိုတာပြောပြမယ်နော် ။ ဒီနေ့တော့ selfie ရိုက်ရင် လှလှလေးထွက်အောင် လူတွေငေးရအောင်…
December 16, 2016 January 3, 2017
Like	4,841 Comments all, home-post-slider, Style
Blogger's Fashion Corner : Trench coat and pencil skirt!!! မင်္ဂလာပါချစ်ရတဲ့ follower များရှင့် ။ ကျွန်မရဲ့ပစ်ထားတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ကဏ္ဏလေးတစ်ခုကိုပြန်စပါရစေ ။ Fashion Tips လေးတွေပေးတဲ့ Blogger's Fashion Corner လေးပါ ။ ပြန်လုပ်ဖို့အားယူနေပေမယ့်…